Gemlight Cane Machete dia miasa haingana amin'ny borosy matevina, ahidratsy lava, voaloboka mahery ary rantsana midadasika, ary koa cane sy anjara asan'ny akondro ary voaniho.
Toy ny antsy machetra Gemlight rehetra dia mirehareha amin'ny lelan-vy maranitra avy amin'ny SAE 1070 avo vy - anisan'ireo henjana indrindra sy maranitra indrindra eto an-tany rehefa avy namono sy nahalefaka ny fitsaboana hafanana. Ary koa ny macère cane dia manasongotra ravin-tendrontany marefo lavorary amin'ny fanapahana zana-katsaka sy fary. Matetika ny antsy dia afatory mba hahafahan'ny mpampiasa misintona ilay tehina voatetika avy amin'ireo zavamaniry mbola mijanona. Ny hatevin'ny ravina manify dia mamela mora manapaka amin'ny zavamaniry fambolena. Omeo ihany koa ny lamosina tsotra, tsara indrindra ihany koa. Ny machete dia manana lelany maranitra izay tsara indrindra amin'ny fanapahana sy fanapahana
Cane machete handle material dia miaraka amin'ny 12inch lava sy 7inch ary 6inch lava, ary koa ny hazo fitaovana dia hazo mafy china misy rivets vy raikitra. Ny halavan'ny lelany dia 13inch, 14inch ary 13.5inch ary habe hafa izay azonay natao araka ny nangatahina. Misy ihany koa ny tahony plastika sy ny tsindrona tsindrona.
Ny machete canel dia be mpampiasa any Filipina, Jamaica, Cuba ary ny faritra sasany any Etazonia. Ary koa, Afrika Atsimo sy India sns.
Marika Gemlight na OEM / ODM Blade Style Cane Machete
Halavan'ny lelany 12,13.5inch, 14inch Halava tanteraka miparitaka
Volom-bolo Miaraka amin'ny farango na tsy misy farango Blade Edge Type Voarara mialoha
Hatevin'ny lelam-bolo Tanana ambony: 2.0mm na OEM Blade Detail Fanaingoana voalohany natao tao amin'ny orinasa
Fitaovana fikirakira Rive na tsindrona Mitantana fitaovana Hazo na plastika
Ny antsy tefitra dia be mpampiasa amin'ny fijinjana tehina, ary ny fijinjana voankazo hafa, ary na dia ny ivelan'ny fiainana
Teo aloha: voaroy